Nhau - "LUXMAIN" Kurumidza kusimudza kunobatsira iwe kuti uchinje yako yemhando modhi
Mune nzanga yemazuva ano, kumhanya kwehupenyu kuri kukurumidza uye nekukurumidza, mhando yemota iri kuramba ichiwedzera kugadzikana, uye pane tsananguro nyowani yekuchengetedza mota. Mota dzisiri-tsaona kazhinji hadzifanirwe kuenda kuchitoro chikuru chekugadzirisa. Vanhu vanosarudza kuenda kuchitoro chidiki chekugadzirisa kana kugadzirisa imba vega. Vanofarira DIY vanofarira kugadzirisa uye kushongedza mota vega. Kunyangwe chiri chitoro cheguta kana garaji remhuri, nzvimbo yacho iri diki, uye hazvigoneke kuisa lift huru yekugadzirisa mota.
Mushure menguva yakareba yekutsvagisa, LUXMAIN yakabudirira kugadzira diki, isingaremi uye inotakurika mota kusimudza --- Kurumidza Kusimudza, iyo inogadzirisa zvataurwa pamusoro-kwenguva refu matambudziko akatambudza vanhu mune imwe kudonha swoop.
Kurumidza Kusimudza rudzi rwekupatsanura mota inotakurika. Ine mutumbi mudiki uye inogona kutakurika nyore nemunhu mumwe. Iyo zvakare yakagadzirirwa nemakumbo emakumbo anokwanisa kufambiswa nyore nekusunda uye kudhonza. Inonyanya kukodzera kumhuri uye kugadzirisa chitoro kushandiswa.
Nekuparadzaniswa dhizaini yekusimudza nekukurumidza, inopa yakakwana nzvimbo yakavhurika pazasi pemotokari kuti ikutsigire iwe kugadzirisa kumisa, kupedza system uye nekuchinja mafuta.
Mafuremu ekusimudza uye humburumbira yemafuta dhizaini isina mvura, iyo inogona zvakare kushandiswa zvakanakira kugeza mota.
Kuunganidza mafuremu maviri ekusimudza pamwe chete nemabhaudhi uye nekuisa yakakosha chikuva pairi, inoshandura kusimudza kwako nekukurumidza kuita mudhudhudhu. Inoita kuti zvive nyore kuti chishandiso chimwe chine mabasa maviri ekusimudza zvese mota nemudhudhudhu.
Kaviri Post Inground Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza, Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Imwechete Kuita Cylinder,